जब प्रहरीले यी व्यक्तिको फ्रिज खोल्यो, त्यो भित्रको अचम्मको दृश्यले प्रहरी पनि छक्क पर्यो ! « Etajakhabar
जब प्रहरीले यी व्यक्तिको फ्रिज खोल्यो, त्यो भित्रको अचम्मको दृश्यले प्रहरी पनि छक्क पर्यो !
अमेरिकाको एरिजोनाबाट एउटा अचम्मको खबर बाहिर आएको छ । यहाँ एक घरधनीले आफ्नो घर भाडामा दिनेलाई दिएका थिए । एक दिन जब उसले भाडामा लिने व्यक्तिको फ्रिज खोल्यो, उसले भित्र एउटा अचम्मको दृश्य देख्यो। यसपछि घरधनीले तुरुन्तै प्रहरीलाई बोलाएर बोलाए ।
वास्तवमा अनुसन्धानमा प्रहरीले फ्रिजरभित्रबाट १८३ जनावरको अवशेष फेला पारेको छ । यद्यपी प्रहरीले भने ती मध्ये केही जीव जिउँदै हिउँमा जमेको पनि दाबी गरेको छ । प्रहरीले ४३ वर्षीय भाडामा लिने माइकल प्याट्रिक टर्ल्यान्डलाई पक्राउ गरेको छ । चाखलाग्दो कुरा के छ भने, टर्ल्यान्डले आफ्नो अपराध स्वीकार गरिसकेका छन्, तर अहिलेसम्म उनले यी जीवहरू कहाँबाट पाएका थिए र कुन उद्देश्यका लागि फ्रीजरमा राखेका थिए भन्ने खुलासा गरेका छैनन्।
जनावरलाई जिउँदै राखेपनि फ्रिजमा चिसोका कारण ज्यान गएको भएपनि
प्रहरीले टर्ल्यान्डमाथि पशु क्रूरताको मुद्दा दर्ता गरी उनलाई पक्राउ गरी कारागार पठाएको र थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । एरिजोना प्रहरी विभागका अधिकारीहरूका अनुसार यी मध्ये केही जनावरलाई फ्रीजरभित्र जिउँदै राखिएको देखिन्छ। जसमा हिउँमा चिसोका कारण केही जनावरको मृत्यु भएको थियो । फ्रिजर भित्रबाट भेटिएका जनावरहरूमा कुकुर, सर्प, छेपारो, कछुवा, मुसा र खरायो आदि पर्छन्।
घरधनीकी श्रीमतीले प्रहरीमा उजुरी गरेकी थिइन्
, प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार मोहावे काउन्टीका अधिकारीहरूले पशु संरक्षण अधिकारीहरूसँग मिलेर एउटा घरको फ्रिजर जाँच गरे। घरधनीको उजुरीपछि उनले यो अनुसन्धान गरेका हुन् । यो गत वैशाख ३ गतेको हो । छानबिन गर्दा ग्यारेज भित्र फ्रिजर राखिएको थियो, जसमा १८३ जना जनावरको अवशेष राखिएको थियो । आरोपितलाई प्रजननका लागि सर्प दिएको तर फिर्ता गर्नुको साटो सबै सर्प राखेको पनि महिलाले उजुरीमा बताइन् ।